आज कति छ सुनचाँदीको मूल्य ? — Imandarmedia.com
नेपाली बजारमा बिहीबार सुनचाँदीको मूल्य सामान्य वृद्धि भएको छ । बुधबार तोलामा ९४ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन बिहीबार ९४ हजार १०० रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यस्तै तेजावी सुन तोलामा ९३ हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
यसैबीच बिहीबार चाँदीको मूल्य पनि वृद्धि भएको छ । बुधबार तोलामा १२६५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी बिहीबार तोलामा १२८० रुपैयाँमा कारोबार भएको हो यस्तै तेजाबी सुन मंगलबार प्रतितोला ९४ हजार ४०० मा कारोवार भएकोमा आज भने प्रतितोला ९३ हजार ५०० मा कारोवार भइरहेको छ । यसैगरी चाँदीको मूल्य पनि आज प्रतितोला ५० रूपैयाँ घटेको छ । प्रतितोला एक हजार ३१५ मा मंगलबार कारोवार भएको चाँदी आज एक हजार २६५ मा कारोवार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
यस्तै नेपाल स्टक एक्सेन्ज(नेप्से) बुधबार अन्तिम समयसम्म आउँदा सामान्य अंकले बढेको छ । कारोबारको सुरुमा परिसचुकको वृद्धिदर हेर्दा सकरात्मक सर्किट लाग्ने आशा गरे पनि ३ बजेसम्म आउँदा ७.०४ अंकले मात्र बढेको छ । आज ११ बजे. २०६१.४१ को बिन्दुबाट सुरु भएको कारोबार ०.३४ प्रतिशशतले बढेर २०६८.४५ को बिन्दुमा पुगेको छ ।
सामान्य अंकले बढेको बजारमा बैंकिङ् समूहको १ दशमलव ५८ प्रतिशत, जीवन बीमाको २ दशमलव ८७ प्रतिशत र म्युचुअल फण्डको शून्य दशमलव ६२ प्रतिशत परिसूचक बढेको छ भने बाँकी समूहको घटेको छ । यो दिन अन्य समूहको परिसूचक सर्वाधिक २ दशमलव २१ प्रतिशतले घटेको छ ।
त्यस्तै जलविद्युतको १ दशमलव ३४ प्रतिशत, व्यापारिकको शून्य दशमलव ५५ प्रतिशत, होटलको शून्य दशमलव ९५ प्रतिशत, विकास बैंकको शून्य दशमलव ८१ प्रतिशत, वित्तको शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत, निर्जीवन बीमाको शून्य दशमलव ५४ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधनको शून्य दशमलव ५ प्रतिशत र लघुवित्तको शून्य दशमलव ९४ प्रतिशत परिसूचक घटेको छ ।
शेयर बजारमा रू। ६ अर्ब ८६ करोड २४ लाख ४५ हजार बराबरको कारोबार भएको छ । २०३ ओटा कम्पनीको ५१ हजार ३०२ पटकको व्यापारमा उक्त रकम बराबरको १ करोड १५ लाख ५८ हजार ९९१ कित्ता शेयर कारोबार भएको हो ।
कुल कारोबारमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार भएको हो । विगत केहि दिनदेखि निरन्तर सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार गर्दै आएको उक्त कम्पनीको बुधवार रू। १ अर्ब ४३ करोड ४४ लाख ९९ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो ।